sentimental gifts for sisters Archives - Best Christmas Izipho Ideas
Best izipho Christmas nangodade:Ixesha ubalulekileyo lonyaka wena nosapho lwakho ixesha leKhrismesi. Nokuba uyazi usapho lwakho ngathi umva wesandla sakho, oko kudla kube nzima ukuba bana phandle ukuba nazo eziya ubabonise indlela ukuthini kuwe, hayi nje phezu leeholide, kodwa lonke ixesha. Udade ngumntu lowo kufutshane kakhulu kwaye usoloko ngaphezu umhlobo. Yena kudla nzima ukumkholisa yaye oku sisizathu sokuba usoloko ufumana kunzima ukwazi ukuba yintoni ukuba usisi wam lweKrismesi. Apha ngezantsi kukho uluhlu oluphangaleleyo, leyo eya kukunceda impendulo yalo mbuzo eziqatha .
Yintoni Ukuze Fumana uDade My Kuba iKrismesi 2017 ?
1. Fashion Wallet(christmas zipho nangodade)
Omnye baculi okuhle christmas zipho nangodade le pink intle: Isiqhelo wallet.When isimbo udade wenu kwezobugcisa uphuma kwi bemanzi ezivenkileni, yena Kufuneka kwindawo ekhuselekileyo ukugcina amakhadi wakhe imali kunye namatyala. Oku entle Cedar Street tavy isipaji ukusuka Kate Spade New York nefanele ebhegini yakhe ngokugqibeleleyo. Nakubeni ingummandla omncinane, le 100 ekhulwini real ngofele isipaji features ezipokothweni slip ngaphakathi nangaphandle, kunye nendawo akukho amakhadi engaphantsi ezisibhozo. Isithsixho ezayo izigqibo umbala ezintathu-: Black / Pebble, Gold and okuDlamkileyo Snapdragon.
2. ndyo ibegi (christmas zipho nangodade)
Ngoko kuthekani ukuba Usisi wakho njengokulungisa sele isipaji olukhulu? Njani into ukwenza oko? Le Rebecca Minkoff esisecaleni ibhegi ke ubungakanani ogqibeleleyo xa 9 intshi nge 5 intshi, kwaye umtya bayo kuhlengahlengiswa njengoko kwama-the-egxalabeni cross-esifubeni; oko kude isuswe ukuze udade wenu ungayisebenzisa njengendlela clutch enomtsalane kangangeentsuku emva ngaphandle edolophini.
Kuba ngomdlalo Sister:
3. Yoga Sports Bag (christmas zipho nangodade)
Xa udade wenu ngomdlalo kuthatha uhambo nakwiziko lokuzilolonga, yena wafumana kakhulu ukwenza. Le yibhegi fantastic ezisebenzayo sinayo indawo zonke iimfuno zakhe, uyihlisele yoga mat! Ngokukodwa sayilwa Manduka nokubonelela yoga kunye pilates ababukeli, oku Go Ezamahala 2.0 nemva features kwipokotho zip ngaphambili leyo ingqamana 26 intshi ngokubanzi yoga mat, isitshixo, ikhadi kwaye ifowuni kwiindawo, kunye nesithuba esikhulu siphambili ibhotile yakhe yamanzi, itawuli nkqu laptop.
4. Tennis Racquet(christmas zipho nangodade)
Ukuba udade wenu yempambano yentenetya, i ucinga omnye christmas izipho (yena) usisi babeya kuba lo.Nangona lixesha iKrismesi, uya kuba udade abalangazelela yakho kwiinyanga zasehlotyeni xa isipho sakhe eli Wilson ezintandathu. Enye Spin Isiphumo yentenetya iracquet. The iracquet uzayo lomkhohlisi, umbala obomvu namhlophe ngomdlalo neempawu zokunciphisa nokungcangcazela ekhethekileyo umqheba. Its iteknoloji Spin Isiphumo unika le iracquet intshi zongezelelweyo inkundla kunye umsi extra emdlalweni. stop olulandelayo Usisi wakho, Wimbledon!
5. Umashini wothunga(christmas zipho nangodade)
Kuba Namaqhinga uDade:Nokuba udade wakho nje ukuqalisa bokuthunga okanye esele isandla endala, lo Mzalwana CS6000i umatshini wokuthunga eningenakukholwa kuya kuba awayedityaniswa yakhe yemka iiyure. Oku smart wokuthunga umatshini kuqhayisa 60 eyakhelwe-ngaphakathi ndithungwe, ngeendlela ezininzi iqhosha umngxuma, indawo jam bobbin resistant nolawulo isantya Womendo. Ingalo kwakhona kukho icandelo ngenxa lwezincedisi ethunga yonke udade wakho. Kunye nazo zonke ezi mpawu kakhulu, Udade wenu angafikelela umatshini kunye nokumiselwa kwiteksti ngokusebenzisa kwidispleyi LCD computer phezu phambi kumatshini, kwaye Unga Thunga ekukhanyeni Bulelani eziphantsi ekukhanyeni wokuthunga eyakhelwe-ngaphakathi.
6. Sketching kunye Drawing Set
Lo ngomnye iincam zam okuhle christmas izipho udadewethu:Xa ngqondweni udade yakho ongowasendle kunye neengcinga zobugcisa ebaleka, ke kuya kufuneka ukuba ufumane uyincamathelise iphepha ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka. Akukho ndlela ilula ukugcina izinto zayo yobugcisa esandleni kunokuba nale Deluxe 134 umsetyenzana wobugcisa isekwe kwi Royal & lang Nickel. Iseti iya kuxhobisa udade wenu kunye iipensile umbala, iinkuni wamalahle, iipensile iPastel, izikhondo alpha, uxovule-nako irabha kunye kakhulu. Kwakhona, uquka Mannequin encinci. yonke sethi kwindawo ezintathu eqaqambileyo ityala iinkuni tiered kunye ngethwathwa Jonga nomqheba.
Sketching kunye Drawing Set
7. Around-Ear iiheadphone
Bose ligama ukuba kudala belisoloko lihamba kunye umgangatho uphezulu yoLungiso kwaye isithethi iteknoloji. Ezi SoundTrue ngeenxa iiheadphone indlebe iza udade wenu intanda nentuthuzelo kakhulu mfuma memory amagwebu xa ehambisa yikristale isandi ecacileyo zemvelo ezindlebeni zakhe. Headset nokuba iquka umboko eyakhelwe-ngaphakathi ukusetyenziswa imbiza. Ezi iiheadphone kuza kwityala ezinamagama zokhuselo kwaye ziyafumaneka imibala ezine lwanamhlanje.
Kuba Umculo Lover:
enye umdla christmas zipho nangodade isiginkci. Umthengisi kakuhle kulo nyaka, le guitar Jameson na isipho esigqibeleleyo ukugcina udade wenu jamming. Nangona zemveli ngokupheleleyo ubungakanani guitar imilo yayo, akukho nto endala lixesha ngale isiginkci kunye ezimnyama blue awayemi uphele, eyakhelwe-ngaphakathi equalizers noyilo zibhityile-abalinde kuphela intshi ezintathu ucinga. Enkosi ezilayishayo yayo eyakhelwe-ngaphakathi, rockin yakho’ sis banokudlala yiplage okanye yiacoustic ngokupheleleyo.
Kuba Glitz and Glam Sister(christmas zipho nangodade):
Nokuba Usisi wakho eyothusayo ephuma kuba ubusuku lulonwabo-ezaliswe edolophini, okanye nje ngemini nobomi bemihla, usoloko ufuna ukuyijonga kangangoko. Yaye akukho nto uya khangela fabulous ezifana ibhedolaki Izixhobo’ professional Maestro Series esenziwe ibhrashi iseti. Isethi luquka 12 ukupeyinta njengemchiza kuquka isiseko, lwekhasi, ndineentloni, ukupeyinta iliso bahluka. ibrashi ngamnye nickel ferrule ngumfanekiswana ezintle mnyama iinkuni nomqheba. The Brushed kuza kumqulu up kwimeko egqibeleleyo kunye pouches ibrashi elongeziweyo xa udade wenu ukhetha ukongeza ukuqokelelwa yakhe kamva.
10. Skin Ukuhlanjululwa System
Ngoko ngudade wenu esenziwe igcisa lokwenene, kodwa elowo igcisa ufuna enye into ethile: wazoba ecocekileyo ukupeyinta kwi. Le nkqubo ulusu ukucocwa Philips PureRadiance usebenzisa idanyaze sonic ukulahla ngothuli, ubumdaka bahluka esiseleyo ngelixa kuphuculwa ejikeleza. Le fowuni uzayo umbala oningga neentloko ibrashi extra zingadityaniswa ngenxa mbulule ngempumelelo. Okubandakanywe bhokisi isixhobo uzihlambululayo PureRadiance kunye ilithiyam Ion ngetshaja, enye intloko ibrashi rhoqo kwaye enye intloko ibhrashi exfoliation. Udade wenu uya kuba nombulelo ngonaphakade xa ufumana esi sipho lukhulu kuwe, yaye akasoze kufuneka ukujongana eqabe encangathi koma-on again.this yenye ozithandayo ukuze christmas zipho nangodade
Skin Ukuhlanjululwa System
Xa kuziwa udade wenu ezizodwa intanda, ufuna ukufumana into ekhethekileyo ngokwenene. ngethemba, olu luhlu kukunika ezinye iimbono kakhulu ngento ukufumana udade wenu lweKrismesi abakhethekileyo njengoko yenza yonke imihla yakho.
Filed Under: Blog, christmas Izipho Tagged With: sipho ilungileyo udade, eyona udade izipho, izimvo isipho lokuzalwa udade, izipho lokuzalwa udade, kuzalwa nangodade, izimvo christmas isipho nangodade, izipho zeKrismesi nangodade, christmas ngezimvo oodade, christmas izimvo akhoyo nangodade, christmas ngokuphuhla udade, izipho DIY nangodade, izipho udade funny, izimvo isipho nangodade, izimvo isipho umakoti, isipho ngezimvo udade, izipho udade, izipho udadewethu, izipho nangodade, izipho nangodade lokuzalwa, izipho udade umzalwana, izipho umakoti, izipho udade wenu, izipho ezilungileyo oodade, izimvo akhoyo nangodade, ngokuphuhla oodade, izipho iyachukumisa yoodade, izipho udade wokuzalwa, izipho udade christmas, izimvo isipho udade, izipho udade, izipho udade ngokuba christmas, udade izipho umthetho, udade nezacholo, izipho udade, izipho ezizodwa oodade, iziphiwo ezikhethekileyo udade, izipho elilodwa udade